गृहमन्त्रीकै अगाडि पूर्वलडाकूले विष पिएपछि मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ, खानतलासीदेखि यस्ता 'लक्ष्मण रेखा' सम्म !
Tue, Feb 18, 2020 at 11:02pm
मन्त्री बादलकै अगाडि उनले विष सेवन गर्न नपाए पनि कार्यकक्षमा छिर्नुअघि नै उनले विष सेवन गरिसकेको खुलेको थियो
शुक्रबार, २१ मंसिर २०७५,	आहाखबर
काठमाडौं, २१ मंसिर
मंसिर ५ मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ कै अगाडि एक पूर्वलडाकुले विष सेवनको प्रयास गरेपछि गृहमन्त्रालय प्रवेशमा सर्वसाधारणलाई कडाइ गरिएको छ ।
मन्त्रीको कार्यकक्षभित्रै पूर्वलडाकु कालिकोटका कुलप्रसाद भट्टराईले विष सेवनको प्रयास गरेपछि मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ गरिएको हो । मन्त्री बादलकै अगाडि उनले विष सेवन गर्न नपाए पनि कार्यकक्षमा छिर्नुअघि नै उनले विष सेवन गरिसकेको खुलेको थियो । हाल नेपाल प्रहरी अस्पतालमा उपचारपछि उनको डिस्चार्ज भइसकेको छ ।
घटनापछि त्यहाँ रहेका सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुलाई सर्वसाधारणलाई मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ गर्न निर्देशन दिइएको स्रोतको भनाइ छ ।
अहिले सिंहदरबार छिर्नुअघि पास देखाएर गृहको गेटमा पुगेका व्यक्तिलाई त्यहाँ पुनः परिचय पत्र देखाउन लगाइन्छ । त्यसपछि भेट्नु पर्ने व्यक्तिसँग फोन गरेपछि मात्रै भित्र जाने अनुमति दिइन्छ । भित्र विद्युतीय सुरक्षा बारबाट कटिसकेपछि व्यक्तिगत विवरणको रेकर्ड राखिन्छ ।
अन्तिममा फेरि बर्दीधारी सुरक्षाकर्मीले सर्वसाधारणको खनतलासी पनि लिने गरेका छन् । जसका कारण मन्त्रालय जाने सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नु परेको छ । त्यति मात्र होइन, समाचार संकलनका लागि मन्त्रालय जाने सञ्चारकर्मीहरुलाई पनि मन्त्रालय प्रवेश सहज छैन ।
मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘विष काण्डपछि यो सिस्टम लागू भएको हो । धेरै मान्छे नआउन् भन्ने नै उद्देश्य हो ।’
यस्ता शर्तनामा गरी ल्याइँदैछ चीनमा रहेका नेपालीलाई!
ओली सरकारको दुई वर्ष : सपना धेरै, उपलब्धि सुस्त
चीनबाट फर्किएका नेपालीलाई आमाबाबुसँग भेट्न नदिइने